आइन्स्टाइनले पत्नीलाई लेखेको चिठी २२ लाखमा लिलाम - GatiBidhi.com
आइन्स्टाइनले पत्नीलाई लेखेको चिठी २२ लाखमा लिलाम
By RS Nepal	 On Aug 17, 2017
एकजना श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई लेखेको चिठीको मूल्य कति होला ? सायद त्यस्तो चिठीको मूल्य श्रीमतीलाई चाहिँ अमूल्य हुनसक्छ अनि अरुलाई अर्थ नहोला । तर, ९८ वर्ष पहिले लेखिएको एउटा चिठी भने लाखौं मूल्यमा बिकेको छ ।
आजभन्दा ९८ वर्ष पहिले वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नी पत्नीलाई लेखेको चिठी २१ हजार ४९२ डलर अर्थात् झण्डै २२ लाख रुपैयाँमा बिकेको छ ।
आइन्स्टाइनले सन् १९१९ को डिसेम्बर ५ मा आफ्नी पत्नी र छोरालाई उक्त चिठी लेखेका थिए । कापीको पन्नाको दुबैतर्फ लेखिएको उक्त चिठीमा आइन्स्टाइनले एकातर्फ अल्बर्ट र अर्कोतर्फ पापा नामबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्तलिखित यो पत्रले आइन्स्टाइनको निजी जिवन र उनको वैज्ञानिक विरासतको विवरण दिन्छ ।
पत्रको सुरुमा आइन्स्टाइनले पत्नी मिलेवा मरिकलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने व्यवस्था र छोरा हेन्स अल्बर्टको शिक्षाको बारेमा चर्चा गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् – यस्तो प्रतीत हुन्छ कि मेरो भाग्यमा फिरन्ते जिन्दगी लेखेको छ । मौजूदा अवस्थामा यो बुझ्न सक्छु कि तिमी निकै राम्रो हुन सक्दछौ । अल्बर्टको स्कुल नसारियोस् भन्ने म चाहन्छु । अर्को पन्नामा उनले छोरा हेन्स र एडबर्डको पढाइका बारेमा अन्य कुरा लेखेका छन् ।
आइन्स्टाइनको यो चिठी अमेरिकाको पिआर अक्सन हाउसमा लिलामी भएको हो ।
२०७४ साउन ३२ गते ११:३५ मा प्रकाशित
राजा महेन्द्र पहिलो चोटी अमेरिका पुग्दा राजा महेन्द्र लै गरिएको सम्मान र स्वागत को video हेरौ !!!